> Resource> FCP> FCP ka DVD: Olee Ọkụ Final Cut Pro Movies ka DVD
FCP bụ a profesional-abụghị linear edezi software maka Mac ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eji FCP ike fim, i nwere ike inwe a ụyọkọ .fcp ma ọ bụ .fcpx faịlụ. Chọrọ mbupụ gị Final Cut Pro nkiri ka DVD? A DVD-ere ọkụ ngwá ọrụ a chọrọ ebe ọ bụ na FCP adịghị ekwe ka ị ọkụ DVD ozugbo. Isiokwu a ga-egosi gị otú ọkụ Final Cut Pro video ka DVD na Wondershare DVD Creator for Mac, a elu-kwadoro DVD e kere eke software na-ahapụ gị ọkụ elu àgwà DVD discs na doro anya menus.
Wondershare DVD Creator for Mac Bụ ezigbo ngwá ọrụ na-esure Final Cut Pro ka DVD na ala. I nwere ike dị mbubata videos (BTW, foto ngosi mmịfe-dịnụ), na-ede akwụkwọ a DVD menu si template, ma lezie ọkụ nkiri na DVD diski na ike ga-egwuri ọ bụla n'ụlọ DVD ọkpụkpọ. Nzọụkwụ site nzọụkwụ, a nkuzi ga-egosi gị otú ị ọkụ FCP ka DVD na Mac OS X (Snow agụ owuru na Ọdụm akwado). Ọ bụrụ na-adịghị a Mac, na-na Windows DVD Creator na ọkụ FCP-exported MOV video ka DVD na Windows.
Easy Nzọụkwụ Ọkụ Final Cut Pro ka DVD
Nzọụkwụ 1: Export video ka MOV na Final Cut Pro
Mgbe ị na-na-na na dezie gị video na Final Cut Pro, bupu ya MOV ma ọ bụ mpg faịlụ site "File> Export> QuickTime Movie". Ọ bụrụ na ọ bụ ihe .fcp faịlụ, na-emeghe ya mbụ si "File> Open" na mbupụ dị ka na mbụ kọwara.
Nzọụkwụ 2: Import FCP video faịlụ
Mgbe ị na-ahụ MOV faịlụ ọma. Na-agba ọsọ a FCP ka DVD burner na mgbe ahụ họrọ ike ọhụrụ oru ngo ịbanye omume window. Iji tinye video ma ọ bụ foto faịlụ, ozugbo ịdọrọ vidiyo ma ọ bụ foto n'ime usoro ihe omume, ma ọ bụ pịa "+" button aka ịchọta media faịlụ na Mac.
Nzọụkwụ 3: Dezie FCP faịlụ na-eme ka a DVD menu (Nhọrọ)
Wondershare DVD Creator for Mac Abịa na niile nkịtị video na foto edezi ngwaọrụ-enyere gị aka gị mgbasa ozi faịlụ. The edezi ngwaọrụ agụnye akuku, bugharia, Kpaa, watermark, mmetụta, wdg Iji jiri ngwá ọrụ a, biko mata gị video clip na pịa "Dezie" button ikpughe edezi window.
Ọ bụrụ na ị chọrọ personlize gị DVD video na a fancy menu, ọ bụ nnọọ mfe iji nke a FCP ka DVD Okike. Ebe a, ihe karịrị 90 preset DVD menu ndebiri na-nyere. Iji na-ede akwụkwọ a DVD menu, dị nnọọ ịgbanwee gaa na "NchNhr" taabụ, ma họrọ a menu template site na listi. Ịnwere ike ihuchalu ya ozugbo site na ịpị preview akara ngosi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịgbanwe ndabere image, ndabere music, item ọnọdụ, wdg ma ọ bụrụ na unu adịghị mkpa a menu, nanị họrọ "Ọ dịghị NchNhr" site na listi.
Nzọụkwụ 4: Ọkụ FCP video ka DVD na Mac
Ugbu a fanye a ide DVD diski gị DVD burner na pịa "Ọkụ". Na ọkụ window, aha gị DVD diski, họrọ gị TV ọkọlọtọ, na pịa Save na-amalite na-ere ọkụ FCP ka DVD diski. Na-ere ọkụ na-agba tumadi na-adabere na gị video ogologo na kọmputa nhazi. Ma echegbula, a usoro e sikwuo na CPU na GPU, si otú ahụ na ngwa ngwa karịa ya yiri ngwaahịa. Mgbe writting FCP ka DVD diski zuru ezu, ọ ga-idaputa-akpaghị aka.
Ọ bụ ya! Ugbu a, i nwere ike cozily na-ekiri ndị kere DVD si FCP faịlụ na nnukwu ihuenyo TV. Biko-enwe!